ရထားပေါ်ရောက်မှ အိမ်သာတက်ချင်နေသည်။ မနေ့ညက အားရပါးရစားလာခဲ့တဲ့ ပဲဟင်းက ကောင်းကောင်းကြီးနှိပ်စက်နေလေပြီ။ ဒုက္ခတော့ရောက်ပြီ။ ပြန်ဆင်းဘို့လဲ အချိန်မမှီတော့။ ရထားက ဥသြရှည်ကြီးဆွဲကာ တရွေ့ရွေ့နှင့်ထွက်ခွါစပြုနေလေပြီ။ “ဘူတာရပ်နေစဉ် အသုံးမပြုရ” ဆိုသောကြောင့် စိတ်တိုတိုနှင့်အောင့်ထားရသည်။ ဘူတာနှင့်နည်းနည်းဝေးတော့ ခရီးဆောင်အိတ်ထဲက အသင့်ပါလာသော တစ်ရှုးစ အနည်းငယ်ဖြဲဆုတ်ကာ အိမ်သာဆီသို့ထွက်ခဲ့လေသည်။ အိမ်သာသို့သွားရာလမ်းတစ် လျှောက် ထမင်းသုတ်၊ ကွမ်းယာ၊ ဆေးလိပ်ရောင်းသော ဈေးသည်များ၊ ပစ္စည်းနေရာ ရွှေ့နေကြသူများနှင့် လမ်းပိတ်နေသည်။ အိမ်သာတက်ချင်နေသော သူ့အဘို့ အလွန်ပင် ဒေါသထွက်ရသည်။ လမ်းပိတ်နေသည်မို့ တော်တော်နှင့်သွားလို့မရသေး။ အောင့်ထားရ လွန်းလို့ မျက်ရည်တွေလည်ပြီး ကြက်သီးတဖျန်းဖျန်းထကာ ဇောချွေးများပင် ပြန်နေလေ သည်။ သည်းမခံနိုင်တော့တဲ့အဆုံး လမ်းပိတ်နေသောသူများကို အော်ဟစ်ပြောဆိုကာ အိမ်သာဆီသို့ ဇွတ်အတင်းထွက်ခဲ့ရသည်။ တစ်ချို့က နားမလည်စွာ၊ တစ်ချို့က အံ့သြစွာ၊ တစ်ချို့ကတော့ ရယ်ချင်နေသောမျက်နှာထားနှင့် သူ့ကိုကြည့်ကြသည်။ သူဂရုမစိုက်နိုင်။ သူ့ကိစ္စက အခြေအနေ တော်တော်ဆိုးနေပြီ။ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းမှ ဖြစ်တော့မည်။ မဟုတ်ရင် လက်ရှိအခြေအနေထက် ပိုဆိုးသွားနိုင်သည်။ အိမ်သာသို့အရောက် ခံစားနေရသောဒုက္ခဝေဒနာများ ကျွတ်လွတ်တော့မည် ဟု မျှော်လင့်ကာ အားရ၀မ်းသာနှင့် အိမ်သာတံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ ဖွင့်လို့မရ။ တံခါးခေါက် ကြည့်တော့ အထဲကလူက တံခါးပြန်ခေါက်သည်။ ဒုက္ခတော့ အကြီးအကျယ်ရောက်ပြီ။ ဟိုဘက် ထိပ်အိမ်သာဆီကို ပြန်သွားဘို့ကလဲ မပြီးနိုင်၊ မစီးနိုင် ပစ္စည်းရွှေ့နေသောသူများနှင့် ရထားပေါ် ရောင်းသော ဈေးသည်များကြောင့် လမ်းကပိတ်နေမြဲ။ ဗိုက်ကတော်တော်အောင့်နေပြီ။ လက်ကိုင် ပုဝါလေးထုတ်ကာ ချွေးသုတ်ရင်း ဒေါသစိတ်ကြောင့် အသက်ရှုသံတို့ပင် တုန်ရင်လို့ နေသည်။ ရှိသမျှအင်အားတွေ စုစည်းပြီး လက်သီးကိုကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုတ်ကာ အိမ်သာတက်ချင်စိတ်ကို မနည်းထိန်းထားရသည်။ အိမ်သာတံခါးကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ခေါက်လိုက်တော့ အထဲမှလူက ပြီးခါနီးပြီဖြစ်ကြောင်း ပြန်ပြောသည်။
“ဒီလူကွာ… ဘူတာမထွက်ခင်ကတည်းကများ အိမ်သာတက်နေသလားမသိ။ စိတ်ဓာတ်အောက် တမ်းကျတဲ့သူပဲ။ တော်တော်စည်းကမ်းမရှိတဲ့သူပဲ။ ဈေးသည်တွေ ကလဲ သူတို့ကြောင့် ခရီးသည်တွေဒုက္ခရောက်ရတယ်။ ၀င်ငွေရတဲ့အလုပ်တွေ အများကြီး ရှိရက်နဲ့ ရထားပေါ်တက်ပြီးတော့ စည်းမရှိ၊ ကမ်းမရှိ ဈေးရောင်းရတယ်လို့” စသဖြင့် စိတ်ဒေါသကိုမထိန်းနိုင်ကာ ကြုံသမျှ ဘုံဘ၀မှာ၊ မြင်သမျှ ဘ၀င်မကျ စရာတွေချည်းသာ ဖြစ်နေတော့သည်။ ခဏနေတော့ အထဲကလူ ထွက်လာသည်။ “ပြီးသွားပါပြီ ခင်ဗျာ” ဟူသောအပြုံးဖြင့် သူ့ကိုနှုတ်ဆက်တော့ ဘ၀င်မကျသောမျက်နှာထားနှင့် တစ်ချက်လှည့် ကြည့်လိုက်သည်။ တံခါးကိုအတင်းဆွဲဖွင့်ပြီး အိမ်သာကြွေခွက်ပေါ်သို့ထိုင်ချ၊ မျက်လုံးမှိတ် ပြီး တင်းထားသောစိတ်တုိ့ကို လျှော့ချလိုက်သည်။
တစ်ချိန်လုံး စိတ်တို၊ ဒေါသထွက်ခဲ့သမျှ အခုမှပဲပြေပျောက်တော့သည်။ ကိစ္စအ၀၀ ပြီးစီးသွား ပြီဖြစ်လို့ မျက်လုံးဖွင့်ပြီး ပါလာသောတစ်ရှုးလေးထုတ်ကာ သန့်စင်မည်အပြု သူ့မျက်လုံးရှေ့တည့်တည့် အိမ်သာတံခါးတွင် ရေးထားသောစာကြောင့် သူအံ့အားသင့်သွားသည်။
စာကိုဖတ်ပြီး ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ဘယ်ဘက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့…
“သင့်ရဲ့ အနောက်ဘက်ကို ကြည့်လိုက်ပါအုံး” ဟုရေးထားသောကြောင့် အနောက်ဘက် ကို လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ အနောက်ဘက်တွင်လဲ
ဆိုတော့ အပေါ်ကို မော့ကြည့်မိသည်။ အပေါ်တွင် ရေးထားသောစာက
“လာကြပါအုံးဗျို့…. ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ အိမ်သာထဲမှာ အရူးကြီးတစ်ယောက် ရောက်နေတယ်”
ဟု ဖတ်လိုက်ရတော့ ဒေါသတစ်ထောင်းထောင်းထကာ တောက် တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပြီး လက်ထဲမှာကိုင်ထားသောတစ်ရှုးနှင့် အညစ်အကြေးတို့ကို သန့်စင်လိုက်တော့ ဒေါသစိတ် နှင့်အတူ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ရင်နေသဖြင့် တစ်ရှုးစလေးပြဲကာ သူ့လက်တွင် မစင်တွေပေကုန်သည်။ မစင်တွေပေသွားသောလက်ကို ခါယမ်းလိုက်တော့ သူ့လက်နှင့် အိမ်သာနံရံကို တိုက်မိသွားသောကြောင့် “အား..” ဟုအော်လိုက်ရင်း နှင့်တစ်ပြိုင်နက် နာကျင်နေသောလက်က သူ့ပါးစပ်ထဲသို့ ရောက်သွားသည်။
မိမိစိတ်ဒေါသကိုမထိန်းနိုင်လျှင် အမှားများစွာကိုကျူးလွန်မိသည့်အပြင် ဒေါသထွက်နေစဉ် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်သမျှ၊ ပြုလုပ်သမျှ အရာအားလုံး၏ရလဒ်သည် ဆိုးကျိုးများသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထိုဆိုးကျိုးများကြောင့် သင့်ဒေါသများ တစ်စထက်တစ်စ ပွါးများနေမည် သာဖြစ်သည်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုဆင်းရဲအောင် ကိုယ်ကိုတိုင်ပဲအများဆုံးလုပ်နိုင်သလို အရာရာကိုမကျေမနပ်၊ ဘ၀င်မကျ ဖြစ်နေတဲ့သူဟာ ကိုယ့်စိတ်ကို ထောင်ချထားသလိုပါပဲ။ ကိုယ့်စိတ်ဒေါသကိုထိန်းနိုင်ရင် ငြိမ်းချမ်းနေမယ်၊ ပျော်ရွှင်နေမယ်၊ ကြည်လင်နေပါ လိမ့်မယ်။ စာဖတ်သူမိတ်ဆွေအပေါင်း ဘုံဘ၀မှာ ကြုံသမျှ၊ မြင်သမျှ ဘ၀င်မကျခြင်းမှ လွတ်ကင်းပြီး အေးချမ်းသောဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်ကာ စိတ်နှလုံးရွှင်ပြုံးနိုင်ပါစေ။
Filed under ဟိုရေးဒီရေး7ယောက်ရဲ့အမြင်
မြစ်ခြား၊ ချောင်းခြား၊ ကမ္ဘာခြားသွားတာထက်
Filed under ကဗျာ 11 ယောက်ရဲ့အမြင်
အညာသား ဖတ်ဖူးတဲ့ ဒဿနလေးတစ်ခုပါ။ မူရင်းစာမူရှင်ကိုမသိပါဘူး။ ကိုကို၊ မမ များရဲ့ ဘ၀အတွက်၊ ဖတ်ရှုဆင်ခြင်၊ တွေးမြင်ကြံဆ၊ သုံးသပ်ကြလော့ ….
အောက်ပါညီမျှခြင်းများကိုကြည့်လျှင် သင်အံ့သြသွားလိမ့်မည်။ သို့သော် ယင်းညီမျှခြင်း ရလဒ် များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် မှန်ကန်ကြောင်းတွေ့ရလိမ့်မည်။
• အရည်အချင်းပြည့်ဝသောယောင်္ကျား + အရည်အချင်းပြည့်ဝသောမိန်းမ = အချစ်ဇာတ်လမ်း
• အရည်အချင်းပြည့်ဝသောယောင်္ကျား + အရည်အချင်းနည်းသောမိန်းမ = ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှု
• အရည်အချင်းနည်းသောယောင်္ကျား + အရည်အချင်းပြည့်ဝသောမိန်းမ = ပြဿနာ
• အရည်အချင်းနည်းသောယောင်္ကျား + အရည်အချင်းနည်းသောမိန်းမ = လက်ထပ်ခြင်း
• အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအလုပ်ရှင်+အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအလုပ်သမား= အကျိုးအမြတ်
• အရည်အချင်းပြည့်ဝသောအလုပ်ရှင် + အရည်အချင်းနည်းသောအလုပ်သမား = ထုတ်လုပ်မှု
• အရည်အချင်းနည်းသောအလုပ်ရှင်+အရည်အချင်းပြည့်သောအလုပ်သမား= ရာထူးတိုးတက်မှု
• အရည်အချင်းနည်းသောအလုပ်ရှင် + အရည်အချင်းနည်းသောအလုပ်သမား = အပိုအလုပ်ချိန်
• ယောင်္ကျားတစ်ဦးသည် သူအလိုရှိသော (၁)ကျပ်တန်ပစ္စည်းကို (၂)ကျပ်ပေး၍၀ယ်ပါလိမ့်မည်။
• မိန်းမတစ်ဦးသည် သူမလိုချင်သော(၂)ကျပ်တန်ပစ္စည်းကို ငွေ(၁)ကျပ်သာအကုန်ခံလိမ့်မည်။
• မိန်းမတစ်ဦးသည် ခင်ပွန်းယောင်္ကျားမရမချင်း သူ၏ရှေ့ရေးအတွက် ပူပန်နေလိမ့်မည်။
• ယောင်္ကျားတစ်ဦးသည် ဇနီးခင်ပွန်းမရမချင်း သူ၏ရှေ့ရေးအတွက် ပူပန်မည်မဟုတ်ပေ။
• အောင်မြင်သောယောင်္ကျားတစ်ဦးသည် သူ၏ဇနီးသုံးစွဲနိုင်သည်ထက် ငွေပိုရှာနိုင်သူဖြစ်သည်။
• အောင်မြင်သောမိန်းမတစ်ဦးသည် ယင်းယောင်္ကျားမျိုးကို ရအောင်ရှာနိုင်သူဖြစ်သည်။
Filed under ဗဟုသုတများ5ယောက်ရဲ့အမြင်
ကျနော်တို့ ဂစ်တာဝါသနာအိုးနှစ်ယောက် စကားပြောနေတုန်း ဈေးရောင်းတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် အိပ်နေရာကနေ ထထိုင်လိုက်ပြီးတော့ “အဲဒါ အစိတ်(၂၅ကျပ်)..အဲဒါအစိတ်” လို့ ပြောတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် သူ့ကို ကြောင်အမ်းအမ်းနဲ့ ကြည့်နေတုန်းမှာပဲ သူက သူ့ကွန် ပျူတာကိုကြည့်ပြီးတော့ “ငါ့ကွန်ပျူတာ ဘာဖြစ်သွားတာလဲ” လို့မေးပြန်ရော။ ကျနော်က သူ့ကို “သယ်ရင်း မင်း ယောင်နေတာလား” လို့မေးတော့ သူက “မဟုတ်ဘူး ငါယောင်နေတာမဟုတ်ဘူး” လို့ ပြန်ဖြေသေးတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ “ဟင်.. ဟမ်.. အင်း အင်း” ဆိုပြီးတော့ ပြန်အိပ်ပျော်သွား တယ်။ မနက်မိုးလင်းတော့ သူ့ကိုပြန်မေးတော့ သူ ဘာဆိုဘာမှမသိတော့ဘူး။ သူ မယောင်တတ် ပါဘူး လို့တောင် ဇွတ်အတင်း ငြင်းလိုက်သေးသဗျ။
နောက်တစ်ယောက် ယောင်တာကြတော့ တစ်မျိုးဗျ။ အိပ်နေရင်းနဲ့ “ဟေ့ကောင် ထမင်းချက်ထား သေးလား” လို့ ကျနော့်ကိုမေးတယ်။ ကျနော်ကလဲ သူယောင်နေတာကို မသိပဲ ..“အင်း..” လို့ဖြေ လိုက်တယ်။ “မင်း ထမင်းမစားရသေးဘူးလား” လို့ ကျနော်သူ့ကို ပြန်မေးလိုက်တော့ သူက “အင်း” တဲ့။ “ထမင်းချက်တာက ခဏပါ.. ဟင်းကတော့ ကြက်ဥပဲ ကြော်ရမှာပဲ” လို့ ကျနော်ပြော တော့ သူဘာမှ ထပ်မပြောတော့ဘူး။ အဲဒီတော့မှ သူယောင်နေတယ်ဆိုတာ ကျနော်သိလိုက်တာ။
(၁၀)တန်းကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ကျနော် အိပ်နေရင်းနဲ့ ကြွက်ကြောတက်တာတော့ ဖြစ်ဘူး တယ်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေ ပြန်ပြောမှသိရတာပါ။ ကိုရွာသားလေးပြောသလိုပဲ အိပ်ရင်းနဲ့ ယောင်နေတဲ့သူရဲ့ခြေမ ကိုကိုင်ပြီးတော့ မေးရင် မေးသမျှကို ပြန်ဖြေတာတို့၊ အိပ်နေရာက ထပြီး လမ်းလျှောက်တာတို့တော့ ကြားဘူးတယ်။ ကျနော်ကတော့ လက်တွေ့မကြုံဘူးပါဘူး။
ကိုရွာသားလေးရဲ့ “အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော” ခေါင်းစဉ်နှင့်ပက်သက်၍ ကျနော်ကြုံတွေ့ခဲ့ သမျှကို ပြန်လည်ဖောက်သည်ချခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါက အလွန်အကြွားသန်တဲ့ ရွာသားနှစ်ယောက် လမ်းခုလတ်မှာ ဆုံကြလေတော့ ကိုယ့်ရွာကထွက်တဲ့ သီးနှံတွေအကြောင်းကို ကိုယ်စီကြွားကြတာပေ့ါ။ ရွာသားနှစ်ယောက် အပြိုင်အဆိုင်စကားနိုင်လုကာ ကြွားကြရင်းနဲ့ အဆုံးသတ်သွားပုံကတော့…
“ငါတို့ရွာကထွက်တဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ်တွေ ကြီးလိုက်ပုံများကွာ ဂေါ်ဖီတစ်လုံးဆိုရင် ဆာလာအိတ်တစ်လုံးပဲ” လို့ ခပ်ရင့်ရင့် ကြွားပြီးပြောလိုက်တယ်။
“ဟာကွာ.. မင်းတို့ ဂေါ်ဖီထုပ်က ဘာရှိသေးလို့လဲကွ။ ငါတို့ရွာကထွက်တဲ့ ငရုတ်သီးကြီးးတွေများကွာ မင်း မြင်စေချင်တယ်၊ ငရုတ်သီးကြီးတစ်တောင့်ကို (၁၀)ဘီးကားပေါ်တင်လိုက်ရင် ကားနဲ့မဆန့်တဲ့အပြင် ကားနောက်မှာ ငရုတ်သီးအညှာကြီးတောင် ထွက်နေသေးတာ” ဟူလေသတည်း။
Filed under ဟိုရေးဒီရေး 1 ယောက်ရဲ့အမြင်
အမေနေ့ အထိမ်းအမှတ်အတွက် အကျွေးအမွေးနဲ့ဧည့်ခံတဲ့ မောင်တာယာကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ထပ်ဆင့်ပြောပါရစေ (မစားရသေးရင် အမြန်သွားဆွဲလိုက်အုံး )။ အမေနေ့ အမှတ်တရအတွက် ကျနော် အညာသားကလဲ မိတ်ဆွေတို့ကို တတ်နိုင်သလောက် မျှဝေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးရှိလို့ပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အမေတွေအားလုံးကို တန်ဘိုးထား၊ ချစ်ခင် ကြည်ညိုကြတာချင်း တူပေမယ့် အမေနေ့ကို နိုင်ငံအလိုက် ကျင်းပတဲ့ ရက်တွေကျတော့ အများအပြား ကွဲပြားနေတယ်ဗျ။ နိုင်ငံ အများစုကတော့ မေလရဲ့ဒုတိယမြောက် တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျင်းပကြတယ် (ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံလဲ အပါအ၀င်ပေါ့ဗျာ)။ စာရေးဆရာကြီး ချစ်စံဝင်း ရေးထားတဲ့ “အမေနှင့်အမေ့အကြောင်း” စာအုပ်လေးကို မဖတ်ရသေးဘူး၊ စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ DownLoad ယူပါခင်ဗျာ။ အမေနေ့ အထိမ်းအမှတ်အတွက် နိုင်ငံအလိုက် အမှတ်တရကျင်းပတဲ့ ရက်တွေကတော့ ကျနော် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ကျင်းပကြတဲ့ရက် အသီးသီးကို စိတ်ဝင်စားလို့ DownLoad ဆွဲချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ပါ။
အမေ အားလုံးအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူပြည်သားအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာပြီး ကန္တာရကပ်ဆိုး၊ အန္တရာယ် အမျိုးမျိုးတို့မှ ကင်းဝေး၍ လိုအင်ဆန္ဒ တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။
ရုရှားဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီး မပြိုကွဲခင် ၁၉၆၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၄)ရက်နေ့တွင် “လူမျိုးစုချစ်ကြည်ရေးတက္ကသိုလ်” (FriendShip University) ကိုစတင်တည်ထောင် ခဲ့သည်။ စတင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်ကတည်းက ဌာနကြီး(၁၀)ခု ရှိခဲ့လေသည်။
၁။ ရူပဗေဒ၊ သချာင်္ နှင့် သဘာဝသိပ္ပံဌာန၊
၄။ သဘာဝလူ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သုတေသနဌာန၊
၁၀။ နိုင်ငံခြားဘာသာနှင့် အထွေထွေစည်းမျဉ်းဌာန တို့ဖြစ်ကြသည်။
ထိုကျောင်းတော်ကြီး၏ ပထမဆုံး ပါမောက္ခချုပ်မှာ ပရော်ဖက်ဆာ-ပက်ထရစ်လူမူဗာ (Patric Lumuva) ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ လေသည်။ ယခုလက်ရှိ ပါမောက္ခချုပ်မှာ ဗလာဒီမာ မီဟာလာဘိခ်ျ ဖီးလစ်ပေါ့ဖ် (Владимир Михайлович Филиппов) ဆိုသူဖြစ်သည်။ ရုရှားနိုင်ငံပညာရေးဆိုင်ရာ သိပ္ပံအကယ်ဒမီ ကောင်စီတွင်လည်း အရေးပါသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်လေသည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၀)ကျော်မှ လူမျိုးစုပေါင်း(၄၅၀)ကျော်တို့ ထိုကျောင်းတော်ကြီးတွင် ပညာသင်ကြားလျှက်ရှိကြသည်။ ထိုကျောင်းတော်ကြီး၏ နှစ်စဉ် မေ(၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်း ပသော ချစ်ကြည်ရေးအထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်တွင် ပညာသင်ကြားနေသော နိုင်ငံအသီးသီးမှ ကျောင်းသားများသာ ပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်ရှိလေသည်။ ထိုကျောင်းတော်တွင် တက်ရောက်၍ ပညာသင်ကြားခြင်းမရှိသော ကျနော်တို့မြန်မာကျောင်းအဖို့ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်သော အခွင့်အ ရေးမရှိပေ။ ထိုကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားနေသော နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၀)ကျော်မှ လူမျိုးစု (၄၅၀) ကျော် ကျောင်းသားများပင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နိုင်ငံတိုင်း ပါဝင်ဆင်နွှဲ နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ MayDay တွင်ကျင်းပသော ချစ်ကြည်ရေးအထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်တွင် (၇၅) နိုင်ငံကျော်သာ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်လေသည်။
(ယခင် “MayDay အမှတ်တရ” ဆောင်းပါးသည် MayDay နေ့အတွက် အမှတ်တရဖြစ်စေ ရန် အချိန်မှီအောင် တင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ထိုဆောင်းပါးတွင် မပြည့်မစုံဖော်ပြ လိုက်ရခြင်းအတွက် စာဖတ်သူအပေါင်းအား ကျနော် အညာသားလေး က အနူးညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။)
May Day အမှတ်တရ
Moscow မှာ FriendShip ဆိုတဲ့ ကျောင်းကြီးတစ်ကျောင်း ရှိသဗျ။ နိုင်ငံ ပေါင်း (၇၅) နိုင်ငံကျော်လောက်က ကျောင်းသားတွေရှိကြတယ်။ အဲဒီ ကျောင်းမှာနှစ်စဉ်မေ(၁)ရက်နေ့တိုင်း ချစ်ကြည်ရေး အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပွဲတော်ကြီးတစ်ခု ကျင်းပလေ့ရှိတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ နိုင်ငံအသီးသီးရဲ့ ကျောင်း သားတွေက ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဓလေ့နဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ဂုဏ်ယူ ၀ံ့ကြွားစွာ ပြသနေကြလေရဲ့။ ကိုယ့်ရိုးရာဓလေ့ အကြောင်းကို အပြန်အလှန် ပြောနေ လိုက်ကြတာများ အားရစရာ။ ခင်းကျင်းပြသထားတဲ့ ရိုးရာအမွေအနှစ်၊ ၀တ် ဆင်ထားကြတဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံတို့ကို မြင်ရုံ၊ ပြောဆိုသမျှကို နားထောင်ရုံနဲ့ နိုင်ငံ အသီးသီးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့တို့ကို ခန့်မှန်းနိုင်ပေပြီ။ အမိမြေနှင့်ခွဲခွါ နေရ ပြီး သူများနိုင်ငံမှာ အမိနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ ရိုးရာဓလေ့ အမွေအနှစ်တို့ကို နိုင်ငံအများသိစေရန် ခုလို ပြောဆိုပြသနိုင်ရန်မှာ ကြီးမားသောအခွင့်အရေး တစ်ခုပင်။ နိုင်ငံအများအပြားမှ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြတာဖြစ်လို့ ကိုယ့်နိုင်ငံအ ကြောင်းကို ဂုဏ်ယူပြောဆို၊ ပြသနိုင်ယုံသာမက တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ရိုးရာ၊ ဓလေ့၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့ကိုပါ လေ့လာသိရှိနိုင်တာမို့ အလွန်တန်ဘိုးရှိပြီး ရှားပါးလှ တဲ့ ချစ်ကြည်ရေးပွဲကြီးပင်။ မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံရိုက်သူ တွေကလဲ မနည်း။ “ကျနော်တို့ မြန်မာကျောင်းသားများသာ ပါဝင်ဆင်နွှဲ ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်” ဟူသောအတွေးဖြင့် အမိမြေကို တမ်းတမိသည်။
ကင်မရွန်းနိုင်ငံရိုးရာတီးလုံးဖြင့် လိုက်ဖက်အောင် ကြိုးစားကပြနေသော ကလေးငယ်။
မြန်မာ့ရိုးရာလုံချည်၊ တိုက်ပုံတို့ကို ၀တ်ဆင်ပြီး မြန်မာ့ဒိုးပတ်ဝိုင်း၊ မြန်မာ့ အက၊ မြန်မာ့အလှ တို့အပြင် ပျူငှာဖော်ရွေသော ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတို့ ကိုသာ ပါဝင်ပြသခွင့်ရမယ်ဆိုရင် အများနဲ့မတူ တစ်မူထူးလှတဲ့ ဂုဏ်ယူစရာ ယဉ်ကျေးမှုကြောင့် နိုင်ငံအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု၊ အထင်ကြီးလေးစားမှု တို့ တသွင်သွင်စီးဆင်းနေမှာ မလွဲပေ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေး မှုရှိကြ သည်။ အခုလို အခွင့်အခါကြုံကြိုက်ပြီး အမိနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဓလေ့ကို ဂုဏ်ယူ ၀င့်ကြွားစွာပြသနေသော နိုင်ငံအသီးသီးမှ ကျောင်းသားများကိုလဲ လေးစား မိသည်။ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာ၊ ဓလေ့ကို တန်ဘိုးထားဂုဏ်ယူတတ်ဘို့၊ ထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်ဘို့ဆိုတာ ကိုယ်ကလွဲလို့ ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိအုံးမလဲဗျာ။
(မြန်မာကျောင်းသားများ ပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်မရခြင်း အကြောင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။)
အထိမ်းအမှတ် နေ့လေး၊ အချိန်လေးတွေ အတွက်ပါ။ မှတ်ထားချင်တဲ့ မိနစ်၊ နာရီ၊ ရက်၊ လ၊ နှစ်တွေကိုအတိအကျတွက်ချက်ပေးမယ့် ဆော့ဖ်ဝဲလေးပါ။ မသိသေး/အသုံးမပြုဘူးသေးတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် မျှဝေပါရစေ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပါ ( 1 Mb တောင်မရှိဘူး)။
၁။ Double Click လုပ်လိုက်တာနဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ Run တဲ့အဆင့်ပြီးပြီဗျ။
၂။ System Tray ထဲက အနီရောင် အသဲပုံလေးရဲ့ R-Click > Setting ကိုသွားပါ။
၃။ Start Date မှာ မိတ်ဆွေမှတ်လိုတဲ့ ရက်၊ လ၊ နှစ် ကိုရွေးပါ၊ Start Time မှာ အချိန်ကိုရွေးပါ၊။ ပြီးတော့
It has been … ရဲ့အောက်မှာ ခင်ဗျားမှတ်ချင်တဲ့ စာသားလေးထည့်ပြီး OK ပေးလိုက်တာ နဲ့ အားလုံး ပြီးသွားပြီဗျ။ အသဲပုံလေးကို တစ်ချက် ကလစ်လိုက်တာနဲ့ ခင်ဗျားသိချင်တဲ့ အချိန်၊ ရက်၊ လ၊ နှစ်တွေကို ဒီ Software လေးက ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
၄။ Run Love Clock at start up မှာ Check ပေးထားရင်တော့ ခင်ဗျား ကွန်ပျူတာဖွင့် လိုက်တာနဲ့ အနီရောင် အသဲပုံလေးက ကြိုဆိုပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ဝင်စားရင် ဒီမှာ Love Clock ။
Filed under SoftWare0ယောက်ရဲ့အမြင်
ဆင်ကြီးတစ်ကောင်သည် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထက် အဆပေါင်းများစွာ သေးငယ်သော ကြွက်မ လေးတစ်ကောင်၏ စကားကြောင့် မတ်တပ်ရပ်နေရာမှ အရုပ်ကြိုးပြတ် ပစ်လဲကျသွား ဘူးသည်။
တီးတိုးညင်သာစွာ ပြောလိုက်သော ကြွက်မလေး၏စကားမှာ..
“ကျွန်မမှာ ရှင်နဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ”
မောကြီးပန်းကြီးနှင့်ပြေးလာသော ဆင်နဲ့ကြွက်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် လမ်းခုလတ်မှာဆုံကြလေတော့ ကြွက်က ဆင်ကိုမေးတယ်။
ကြွက်။ ။ ဘာဖြစ်လို့ မောကြီးပန်းကြီးနဲ့ ပြေးလာတာလဲ သူငယ်ချင်း။
ဆင် ။ ။ ငါ့ကို ဆင်ရိုင်းတစ်ကောင်က ရန်ရှာပြီး သူ့အစွယ်နဲ့ လိုက်ထိုးနေလို့။ မယုံရင်ငါ့ကျောကုန်းကို ကြည့်ပါလား၊ ပြဲသွားတာ တစ်တောင်လောက်ရှိတယ်။ ဒါနဲ့ မင်းကရော ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင်ပြေးလာတာလဲ။
ကြွက်။ ။ ငါလည်းမင်းလိုပဲကွ။ ငါ့ကို ကြောင်တစ်ကောင်က လိုက်ခုတ်နေလို့။ မယုံရင် င့ါကျောကုန်းကို ကြည့်ပါလား၊ ပြဲသွားတာ တစ်တောင်လောက်ရှိတယ်။
ဆင်။ ။ အောင်မာ…. မင်းခန္ဓာကိုယ်က တစ်ထွာလောက်ပဲရှိတာကိုများ၊ ပြဲသွားတဲ့ဒဏ်ရာက တစ်တောင်ရှိမလားကွ။ ဟုပြောပြီး ဟားတိုက်၍ ရယ်လေသည်။ ပြန်လည်ချေပပြောဆိုလိုက်သော ကြွက်၏စကားမှာ..
ကြွက်။ ။ အေးလေ။ မင်းလည်း မင်းအတောင်နဲ့မင်း၊ ငါလည်း ငါ့အတောင်နဲ့ငါပေါ့။